Rapeto hono, dia Vazimba talohan'izany Andriamanelo, mpanjaka taty fony fahagola. Teo Ambohidrapeo andrefan'Antananarivo, no vohitra nitoerany. Lavabe nahatakatra ny lanitra izy. Tany anaty ala atsinana no nandrahoiny ny variny, nefa tany Ambohidrapeto no nihinanany azy.
Tany Ambohitrarahaba, avaratr'Antananarivo, no filalaovany, ka nataony indray mandingana ihany hatreny Ambohidrapeto ka hatreny Ambohitrarahaba. Izy no nanao ny tsentsin-drano vato vaventibe ao am-bodin'Itasy, ka namboariny ho farihy lehibe, hisotroan'ny ombin-dRasoalao vadiny.
Ilay vato loaka tahaka ny dian-tongotr'olona ao an-dalamben'Ambohitrarahaba dia nohitsahin'ny faladiany sy niankinan'ny ranjony, hono, hampisehoany ny heriny. Ary ny loadoaka eny amin'ny vatolampy maro dia lazaina hoe diany avokoa.
Indray mandeha izay dia nanampatra ny heriny loatra izy ka naka ny volana holalaovin'ny zanany; kanjo nasian'ny volana diamanga izy ka dangy nitsitra tery. Lazain'ny sasany kosa anefa fa nankany atsinanan'Amorokay izy, ka tany no nahafatesany.
Rasoalao kosa, hono, dia Vazimbavavy avy any Ankaratra, ka niankandrefana nankany Ambohiiangara ary nanambady an-dRapeto, ka niteraka vavy roa, dia Rasoavolandrainy sy Rangorimanga. Tao Ambohimiangara sy Ikasige any Mandridrano ary tao Ambatomanjaka sy Ambohiby, any Mamolakazo, no nisy vohitra fonenan'izy mivady. Mbola ao an-tampon'Ambohimiangara mandra'ankehitriny, hono, ny vilany vin-dRasoalao sy ny fahitr'ombiny ary ny fatoran-janakombiny.
Ny ombimanga rehetra any Antsakalava dia atao hoe "ombimangan-dRasoalao"; ary raha handeha hisambotra ireny ny mpanonta, dia mitaraina amin-dRasoalao sy Iktofotsy (vorompotsy) mpiandry ny ombiny mba hanome ombimanga azy, vao sahy mandroso manenjika.
Angano ihany izany...